Namhlanje isambatho sekhompyuter Isetyenziselwa ukuhombisa iintlobo ezahlukeneyo zamalaphu kunye neempahla, ezinje ngezikipa eziprintiweyo, kunye nempahla yobuqu esetyenziswa emsebenzini nakuzo zonke iintlobo zeentlanganiso.
Impahla enoprinta inokuba yinto yentengiso kunye noncedo ekwakheni uphawu lwakho. Ushicilelo lwekhompyuter lubekwe kwi iihempe, iibhulukhwe, iihempe, iikepusi, iimpahla zokukhusela nezokusebenza.
Ndwendwela ivenkile yethu ekwi-intanethi >>
Eyona iqhelekileyo, nangona kunjalo Izikipa eziprintiweyoezithandwa kakhulu namhlanje. Bayakuvumela ukuba uphumeze umntu ngamnye, nkqu nezona zimvo zintlandlolo zeempahla zakho. Isisombululo esifanelekileyo kwiinkampani, imibutho, yonke imibutho kunye nabantu abafuna ukusebenzisa iimpahla zabo kunye nelogo okanye ubhalo kuyo.
Ifunwa-emva kokusebenza ngoku, okwangoku kunye neyantlandlolo amalaphu okuhombisa kunye neempahla inokwenziwa yindlela isambatho sekhompyuter. Iimpawu kunye nemibhalo ebhaliweyo ngolu hlobo yomelele kakhulu kwaye intle ngaxeshanye. Ukuhonjiswa kunokwenziwa kuzo zonke iintlobo zezinto zokunxiba ngeenjongo ezahlukeneyo, kubandakanya ukumela okanye iimpahla zentengiso.
Imizobo yomntu ngamnye kunye nokuqina
Iipateni zoqobo ezenzelwe umntu ngamnye zenziwe kumalaphu. Inkqubo yokuhombisa umatshini ikuvumela ukuba wenze inani elingenasiphelo leempawu kuwo nawuphi na umbala owukhethayo.
Enkosi koomatshini abaziingcali, kuyenzeka ukuba wenze iipateni ezizodwa kuzo zonke iintlobo zempahla kunye namalaphu ohlukeneyo usebenzisa indlela yokwenza izinto ekhompyutheni.
Olu lungiso lunokusetyenziswa ngempumelelo ukumakisha iintlobo ezahlukeneyo zeT-shirts apho kufuneka zivele khona ilogo yenkampani okanye umbutho, umbhalo okanye uphawu olwahlukileyo.
Olu hlobo lomhombiso luyamelana nokuhlamba rhoqo kunye nokusetyenziswa kakhulu kweempahla. Ukongeza, igcina imibala eqaqambileyo kubo bonke ubomi bengubo. Ukuhanjiswa kwekhompyuter Isebenza kakuhle kwiindidi ezahlukeneyo zamalaphu, kumqhaphu, amalaphu okwenziwa, nakwimpahla ekhuselayo okanye eboyeni.
Enkosi ngokusetyenziswa kwetekhnoloji yale mihla, kunokwenzeka ukuba wenze uphawu lwantlandlolo, olwahlukileyo nolusisigxina okanye umbhalo kwiindidi ezahlukeneyo zempahla. Kubandakanywa iintlobo ezahlukeneyo zehempe zabasetyhini kunye nezamadoda, ezemidlalo, umsebenzi okanye iihempe zemihla ngemihla.
I-T-shirts eziprintwe nge-embroidery yekhompyuter ephawulwa ngokusetyenziswa kwemisonto ekumgangatho ophezulu yokuhombisa. Oku kuqinisekisa ukuzinza komqondiso owenziweyo. Ukusetyenziswa kakhulu kweempahla kunye nokuhlamba rhoqo, nokuba kubushushu obuphezulu, umgangatho awunciphi.
I-T-shirts ezinoprinta wakho zihlala zibonakaliswa kuyilo lwantlandlolo olusisiseko sempumelelo.
Izikipa zamadoda, kunye nezikipa zabafazi ezineeprinta, lelona qela lezona mveliso zifunwa kakhulu. Eli nqanaba lempahla linendawo ekhethekileyo kwisibonelelo sethu.
Izinto ezilukiweyo zekhompyuter zisetyenziselwa ukuhombisa iiT-shirts. Olu hlobo lwamalaphu okuhombisa lufuna ubuchule ekwenzeni iipateni, njengoko izinto ezininzi kufuneka zithathelwe ingqalelo ngexesha lomsebenzi, eliya kuthi kamva liqinisekise ngempembelelo eyodwa. Zininzi izinto ezibalulekileyo ekufuneka zichongiwe ngexesha lokulungiswa kweprojekthi. Inqanaba lobunzima bepateni liguqulela ekumiselweni koxinano lwemisonto esetyenziselwa ukwenza ipateni, izinto ezingaphantsi komhlaba kunye nobungakanani bephawu olubonisiweyo.
Inkqubo yokwenza ushicilelo lwekhompyuter iqala ngokwenza uyilo kunye nokukhetha imibala. Kwinyathelo elilandelayo, ukuprinta kwenziwa kwilaphu.
Amava amaninzi ekudaleni i-computer embroidery isiqinisekiso sesiphumo esipheleleyo. Umzekelo weodolo uboniswe apha ngezantsi kumzekelo weT-shirt yezemidlalo enoprinta.
Uluhlu olubanzi lwemibala yemisonto kunye nomphezulu ofanelekileyo wokuhombisa uvumela ukuba wenze ushicilelo loqobo. Uyilo lwabathengi alunamida, ngakumbi ngempahla eyalelweyo kuzo zonke iintlobo zemisitho ekhethekileyo kunye neziganeko.
Iipateni ezenziwe kwasekuqaleni kunye nemibhalo ebhaliweyo ayihombisi kuphela iihempe zezemidlalo ngokushicilela kwazo okanye iihempe zehempe ezinokuhonjiswa ngekhompyuter, kodwa kunye neempahla ezisebenzayo nezikhuselayo.
Ukunikezelwa kwee-T-shirts eziprintwe nge-embroidery yekhompyuter kubhekiswa kubo bobabini abantu, imibutho, nakwiinkampani ezifuna ukugqama ngeempahla ezintle ezinophawu olubonakalayo lwelogo yazo, igama lenkampani okanye uphawu lombutho.
5 / 5 ( 16 iivoti )
Iikipa eziprintiweyo ze-allegroIzikipa ze-decathlon ezineprintaApho kuprintiweyo izikipaUngazithenga phi izikipa eziprintiweyoUngazithenga phi i-t-shirts ngokuprinta kwakhoapho ungathenga khona izikipa eziprintiweyoApho ungayalela khona ii-t-shirts ngokuprinta kwakhoapho unokwenza khona i-T-shirts ngokuprintaApho kufanelekileyo uku-odola i-t-shirts ngokuprinta kwakhoApho uku-odola i-t-shirts eprintiweyoApho uku-odola i-t-shirts ngokuprinta kwakhozenzelwa phi izikipa eziprintiweyoKubiza malini ukuvelisa isikipa esiprintiweyoKubiza malini ukwenza isikipa esishicilelweyouzihlamba njani izikipa ezimhlophe eziprintiweyouzihlamba njani izikipa eziprintiweyoindlela yoku-ayina i-T-shirts eziprintiweyozenziwa kanjani izikipa eziprintiweyoUyenza njani i-t-shirts eprintiweyoUkuqhuba i-t-shirts kunye nokuprintaIikipa zabasetyhini ezinoshicileloIikipa zabasetyhini ezinooshicilelo lwakhoIikipa zabantwana abaneprintUkuqhuba i-t-shirts kunye nokuprintaiziqhamo zee-t-shirt ezishicilelweyoIzikipa zonyango ezineprintaIikipa zamadoda ezineempapashoIikipa zamadoda ezineempapasho ezi-3dIhempe zebhola kunye nokuprintaIjezi yebhola ekhatywayo eprintiweyoIhempe zepolo ezinoshicileloIikipa zomsebenzi ezishicilelweyoIzikipa zemidlalo ezinoshicileloIzikipa zemidlalo ezinoshicilelo lwakhoI-t-shirts ezinokuthambisa ezishicilelweyoI-T-shirts eziprintiweyoI-t-shirt eneprinta ye3DI-T-shirt ezinoprinta lwe-allegroI-T-shirt enombhalo weBiałystokI-t-shirts ezineziprinta zabafaziIikipa ezineshicilelo yabantwanaI-T-shirts kunye nokuprinta kweGdańskI-T-shirts eziprintiweyo apho ungathenga khonaI-T-shirt eneprinta apho uza kuyala khonaIzikipa ezineshicilelo zokwenzaI-T-shirts ezinamaphepha afana notata, nyanaI-T-shirts ezinopapasho lweKatowiceI-T-shirt eneprinta ye KrakowIikipa ezineshicilelo lesikhepheI-T-shirts kunye nokuprinta kweLublinIikipa ezineshicilelo yamadodaIikipa eziprintwe ngokwesikoI-T-shirts enoprint olsztynI-T-shirts kunye nepoznań yokuprintaI-T-shirt enoshicilelo lwabantuI-T-shirt enebristles eprintiweyoI-T-shirt eneprinta yaseWarsawI-T-shirts kunye neprinta yakhoI-T-shirts ezinombhalo oshicilelweyoI-T-shirt eneprinta yokuthand 'izweIzikipa eziprintiweyoI-T-shirt ezinoprinta i-allegroI-T-shirts eprinta eyakho iKrakowI-T-shirt eneprinta yakho poznańI-T-shirts eprinta eyakho ngexabiso eliphantsiI-T-shirts kunye neprinta yakho iWarsawI-T-shirts kunye neprinta yakho eprintiweyoIzikipa ezihlekisayo ezinoshicileloIikipa ezingabizi kakhulu ezinoshicileloIzikipa ezingabizi kakhulu ezinoshicilelo lwakho
Jonga amanye amanqaku:
28 Oktobha 2020
Ukuprinta kwe-DTG, ukumakisha kwinto enye
31 Agasti 2020
1 Julayi 2020
Ukufakelwa kombane kwikhompyutha- yintoni?
P & M. Onke amalungelo agciniwe 2020